Chinaha oo Ruushka kasoo dhoofsaday Saliida Ceyriin ee ugu badan bishii May
HomeWararka CaalamkaChinaha oo Ruushka kasoo dhoofsaday Saliida Ceyriin ee ugu badan bishii May
June 20, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Shiinaha ayaa soo dhoofsada saliida ceyriinka ee Ruushka waxa uu gaarsiiyay heerkii ugu sareeyey bishii May waxana uu 55 boqolkiiba ka sarreeyey isla bishii hore ee sannadkii hore, sida lagu sheegay xogta kastamka Shiinaha.
Korodhka xooggan ayaa la macno ah in Ruushku uu kala wareegay Sucuudiga oo ah dalka Shiinaha ugu badan ee shidaalka keena, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters .
Korodhkan ayaa ku soo beegmaya xili wadamada reer galbeedku ay soo saareen mamnuucida saliida Ruushka ee laga soo dhoofiyo dalka Ukrain. Tirakoobkan cusub ayaa tilmaamaya in Ruushku wali awood u leeyahay inuu iibiyo shidaalkiisa.
Ruushka ayaa saliidda u dhoofiya Shiinaha labadaba isaga oo sii mara dhuumaha saliidda ee mara Siberia iyo Pacific, iyo markab. Bishii Maajo, ku dhawaad ​​8.42 milyan oo tan oo saliid Ruush ah ayaa loo dhoofiyay Shiinaha, sida laga soo xigtay tirooyinka Shiinaha ee la sii daayay Isniintii.